प्रमाणपत्र विवादमा फसे जोशी,तथ्य प्रमाण खोज्दै सुनुवाइ समिति. – RadioMBC
Home > समाचार > प्रमाणपत्र विवादमा फसे जोशी,तथ्य प्रमाण खोज्दै सुनुवाइ समिति.
१३ श्रावण २०७५, आईतवार १०:५६
काठमाण्डौ -प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको अनुमोदन धकेलिएको छ। प्रमाणपत्रमा फरकफरक तथ्याङ्क भेटिएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। जोशीको अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न आज बिहान ८ बजे बैठक डाकिएको थियो।
बिहिबार नै सुनुवाइ भै सकेको भएपनि सुनुवाइ समिति सदस्यले जोशीको प्रमाणपत्रबारे नयाँ तथ्य फेला परेको र विवादमा परेकाले बैठक सार्नु उचित हुने मत प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री लगायत अरु सदस्यहरुले प्रमाणपत्रबारे थप बुझ्नु उचित हुने बताएका थिए। सहमतिपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बैठक आइतबार ८ बजेका लागि सारिएको थियो।समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘केही सदस्य बाहिर जानुपर्ने भएकाले बैठक भोलिसम्मका लागि सर्‍यो।
अहिले शैक्षिक योग्यताको विवाद उच्च राजनीतिक तहमा समेत परामर्श भइरहेको छ। सनुवाई समितिका सदस्यहरुका अनुसार जोशीले समितिमा बुझाएको एसएलसीको सिम्बोल नंम्बर (३६६७) अर्कै व्यक्तिको नाममा भेटिएको हो।‘अर्कै व्यक्तिको नाममा रेकर्ड फेला परेको छ ।‘ नयाँ रेकर्ड फेला परेसँगै बुझ्नकै लागि समिति बैठक सारिएको सुनुवाइ समितिका एक सदस्यले बताए।त्यो फेला परेको डकुमेन्ट फोटोकपी मात्र भएकाले विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको बताए। यसअघि आइजिपी प्रकरण फोटोकपीकै कारण भएको थियो । उक्त डकुमेन्टहरु प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्राप्त भएको तथा ‘सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुसँग पनि प्रमाणपत्रहरुको फोटोकपी आइपुगेको छ’, स्रोतले भन्यो। यस अघि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले यस बिषयमा प्रमुखताका साथ समाचार समेत प्रकाशित गरेको थियो ।